Lykke စျေး - အွန်လိုင်း LKK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Lykke (LKK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Lykke (LKK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Lykke ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
LKK – Lykke
Market ကဦးထုပ်: $2 121 452.00
volume_24h_usd: $41 101.10
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Lykke တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Lykke များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
LykkeLKK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0164LykkeLKK သို့ ယူရိုEUR€0.0139LykkeLKK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0126LykkeLKK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.015LykkeLKK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.148LykkeLKK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.104LykkeLKK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.366LykkeLKK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0614LykkeLKK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0219LykkeLKK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0229LykkeLKK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.367LykkeLKK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.127LykkeLKK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0891LykkeLKK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.23LykkeLKK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.77LykkeLKK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0225LykkeLKK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0248LykkeLKK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.512LykkeLKK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.114LykkeLKK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.74LykkeLKK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩19.49LykkeLKK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦6.34LykkeLKK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.21LykkeLKK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.454
LykkeLKK သို့ BitcoinBTC0.000001 LykkeLKK သို့ EthereumETH0.00004 LykkeLKK သို့ LitecoinLTC0.000284 LykkeLKK သို့ DigitalCashDASH0.000168 LykkeLKK သို့ MoneroXMR0.000176 LykkeLKK သို့ NxtNXT1.15 LykkeLKK သို့ Ethereum ClassicETC0.00236 LykkeLKK သို့ DogecoinDOGE4.68 LykkeLKK သို့ ZCashZEC0.000172 LykkeLKK သို့ BitsharesBTS0.63 LykkeLKK သို့ DigiByteDGB0.562 LykkeLKK သို့ RippleXRP0.0558 LykkeLKK သို့ BitcoinDarkBTCD0.000559 LykkeLKK သို့ PeerCoinPPC0.0548 LykkeLKK သို့ CraigsCoinCRAIG7.39 LykkeLKK သို့ BitstakeXBS0.692 LykkeLKK သို့ PayCoinXPY0.283 LykkeLKK သို့ ProsperCoinPRC2.04 LykkeLKK သို့ YbCoinYBC0.000009 LykkeLKK သို့ DarkKushDANK5.2 LykkeLKK သို့ GiveCoinGIVE35.09 LykkeLKK သို့ KoboCoinKOBO3.64 LykkeLKK သို့ DarkTokenDT0.0151 LykkeLKK သို့ CETUS CoinCETI46.79
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 06:15:02 +0000.